Ndị na-emepụta Rakes na Factory - China Rakes Manufacturers
Ihe oru ugbo
Ihe nkpuchi Diski
Onye na-azụ ihe
Onye na-akụ ihe
Ọka / Wheat Planter
Onye na-akpo Wheat
Ọka / Wheat / Osikapa Na-ewe Ihe Ubi
Ndị na-egbu egbu & Mowers
Ndị Tractor na-eje ije
Igwe oru ugbo ala ugbo ala
3Z Cultivator Maka Oka Soybean Cotton
Arọ Disc Harrow Maka Ugbo 1BQX
Arọ Disc Harrow Maka Ugbo 1BJ
65Mn elu ekwedo mmiri-nha nha ana achi achi nke a hayrake nwere ike imeghari dị iche iche landforms. Ogwe aka ya nwere ike gbanwee ogo 90, si otú a mee ka traktọ rụọ ọrụ n'ọhịa. Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ịkpụzi nkwonkwo nkwonkwo iji nweta ihe dị iche iche achọrọ. Nka na ụzụ nkọwapụta akụkụ 9LZ-2.5 9LZ-3.0 na-arụ ọrụ obosara mm 2500 3000 dakọtara ike hp ≥15 30-40 Qty nke diski PC 4 5 Swath obosara mm 500-1500 ...
Product Ihe The diski hay zaa igwe adabara nghọta na atọ mgbe nkwusioru ngwaọrụ nke wheeled traktọ. Akụkụ ọrụ bụ diski nwere ezé. A na-ebunye igwe igwe ahihia ahihia nke akpukpo aka nke ozo n'usoro site na nkpisi aka rue mgbe etolite ahihia na ventilated. Gbanwee akuku nke mkpịsị aka mkpịsị aka nwere ike idozi obosara nke ahịhịa. Cuddling ezé n'ihi na ogologo mmiri ígwè ezé, combing ezi mmetụta, ike iyingomi arụmọrụ. Rak ...
ọkachamara na traktọ
Shandong Xintengwei Imp. & Gbanyụọ. Co., Ltd.(RY AGRI), nke e guzobere na 2014, nke dị n'obodo Linqing, Shandong Province, China. RYAGRI bụ ụlọ ọrụ ọkachamara iji nye igwe dị iche iche ọrụ ugbo na ngwa ọrụ, dị ka traktọ, ndị na-ewe ihe ubi, ndị na-akụ ihe ubi, ndị na-akụ akụ, ndị na-agba ọsọ, ndị na-akụ hama, nfuli mmiri na ihe ndị ọzọ. , Unit States, Russia, Iran, South Africa, Nigeria, Ethiopia na obodo ndị ọzọ.